Yuu Fiiriyaa Xayeysiiska Banner | Martech Zone
Talaado, Juun 25, 2013 Douglas Karr
Kama soo horjeedo xayeysiinta banner, laakiin waxaan ka soo horjeedaa inaanan lahayn xayeysiis banner ah oo bixiya wicitaan xoog leh oo ficil ah (CTA) oo ku dhow waxyaabaha ku habboon ee loo soo bandhigay dhagaystayaasha khuseeya. Marar aad u tiro badan, waxaan booqdaa degel websaydh ah oo aan arko xayeysiis banner ah oo aan shuqul ku lahayn waxyaabaha ku xeeran. A banner ad ugu fiican wax qabadka markay tahay CTA meel loo socdo qof ku soo degay goob rajaynaya inuu sii hawl galo.
Xayeysiisyada Banner ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday webka 1994kii ilaa waqtigaasna si ballaadhan ayaa looga isticmaalay internetka. Waxaa loo sameeyay inay noqdaan indho soo jiidasho leh oo cajiib ah sidaa darteed waxay ku abuuri karaan dhiirrigelinta martida inay gujiyaan ganacsigooda. Laakiin, waxsoosaarkoodii badnaa iyo sida qaldan ee ay u isticmaaleen ayaa u horseeday daawadayaashu inay ka shakiyaan oo aan iyaga u jawaabin. 8 sano kadib, dadku wali maku dhacaan xayeysiintan soo jiidashada leh?
Sawir-gacmeedkan ka socda Suuq-geynta Shirkadda Ayaa Fiirinaya Xayeysiiska Banner, waxay siisaa xoogaa aragti ah su'aashaas.